ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ပါ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ပါ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပုံစံ - Portrait back cover laser
▲【၃၆ မီလီမီတာ】28mm ၏အချင်းအတွင်းမှာပဲ,လိုဂို၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏.
စျေးနှုန်းမှာဓာတ်ပုံပါဝင်သည်(လူ ၂ ယောက်ထဲမှာ)ပုံတူမျဉ်းပုံဆွဲခြင်း.
(ကြောင်များ/ခွေး/အရုပ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ...စသည်တို့.1 လူတစ် ဦး အဖြစ်လည်းရေတွက်နေကြသည်,အပိုလူများကိုသီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/my/watch-back-case.html
ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း, ထောက်ပံ့ရေးနှင့် Export ကို၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တင်းကြပ်စွာ "အရည်အသွေးမြင့်မားမြန်ဆန်ခြင်းပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်" ၏အ everexisting မူအရကပ်လျက်ရှိ၏။ ငါတို့ကဲ့သို့အစဉ်အမြဲနဲ့ co-စစ်ဆင်ရေးရှာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဖောက်သည်တွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေမည်။
ဝါကျတစ်ကြောင်းသည်လူတစ် ဦး အားမှီခိုအားထားနိုင်သည်,ပြီးတော့ဝါကျတစ်ချက်ကလူတွေကိုနွေးထွေးမှုနဲ့လှပမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်.ယခုသင်ဂရုစိုက်သူအားသင်၏နှလုံးသားဆန္ဒနှင့်ကောင်းချီးများကိုစတင်ပြောဆိုပါ.အဲဒီစကားတွေပြောနေတာကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်နေမှာပါ. ,သင်၏ဘဝနှင့်အတူလိုက်ပါ. နောက်ကျောအကြောင်းလေဆာနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဖုံးအုပ်ပါ ▲【41mm】33mm အချင်းနှင့်အတူ,လိုဂို၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. ▲【၃၆ မီလီမီတာ】28mm ၏အချင်းနှင့်အတူ,လိုဂို၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,ID ပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်.နာရီနာရီ စကားလုံးအရေအတွက်ကန့်သတ်မထားပါ,အာကာသ၏အရွယ်အစားအဓိကအားဖြစ်ပါတယ် သင်တစ် ဦး ပုံစံလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်,အဖြူရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အနက်ရောင်လိုင်းများပါသောပုံစံကိုသင်ပေးရမည် မူပိုင်ခွင့်ပုံစံများအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြုပါနှင့် စိတ်ကြိုက်နာရီကိုထောက်ပံ့ပါ:နာရီအားလုံးစီးရီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ပါ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ပါ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ပါ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
လက်ရေးကိုအချိန်နှင့်စိတ်ခံစားမှု condenser,စက္ကူပေါ်ကလက်ရေးဆိုတာမင်းနဲ့ငါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘ ၀ ရဲ့အပူချိန်ဖြစ်တယ်.သင်ရေးလိုက်သောစကားလုံးများကိုမြင်ရခြင်းသည်သင့်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းနှင့်တူသည်,ဒါကမင်းသာငါ့ကိုပေးနိုင်တဲ့နွေးထွေးမှုပဲ.လက်ရေးသည်လက်ဆောင်ပေးသူ၏ပေးကမ်းခြင်းနှင့်အာရုံစိုက်မှုကိုဖော်ပြနိုင်သည်,ပင်ရိုးရှင်းသောစကားများထိမိနေကြသည် နောက်ကျောအကြောင်းလေဆာနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဖုံးအုပ်ပါ ▲【41mm】33mm အချင်းနှင့်အတူ,လိုဂို၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. ▲【၃၆ မီလီမီတာ】28mm ၏အချင်းနှင့်အတူ,လိုဂို၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,ID ပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်.နာရီနာရီ လက်ရေးဖြင့်ရေးသားထားသောပုံဆွဲမိတ္တူကိုနောက်ခံအဖြူတွင်အနက်ရောင်စာလုံးများပါရှိသည် စကားလုံးအရေအတွက်ကန့်သတ်မထားပါ,အာကာသ၏အရွယ်အစားအဓိကအားဖြစ်ပါတယ် သင်တစ် ဦး ပုံစံလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်,အဖြူရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အနက်ရောင်လိုင်းများပါသောပုံစံကိုသင်ပေးရမည် မူပိုင်ခွင့်ပုံစံများအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြုပါနှင့် စိတ်ကြိုက်နာရီကိုထောက်ပံ့ပါ:နာရီအားလုံးစီးရီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်